Samsung Exynos 2200 ချစ်ပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ? - MiteLar
Samsung Exynos 2200 ချစ်ပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
2019 ခုနှစ်တွင် AMD နှင့် Samsung တို့သည် Radeon ဂရပ်ဖစ်များကို Exynos hardware သို့ သယ်ဆောင်ရန် ပူးတွဲမိတ်ဖက် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က AMD က GPU သည် ၎င်း၏ RDNA architecture အသစ် အပေါ်အခြေခံလိမ့်မည် ဖြစ်ပြီး Samsung သည် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုင်စင်ကြေးနှင့် မူပိုင်ခွင့်များကို AMD အား ပေးလိမ့်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် စက်ပစ္စည်းကြေငြာခြင်းကို ရှေ့ပြေးအဖြစ် သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ Korean Economic Daily နှင့် ပြောဆိုနေသည့်သတင်းရင်းမြစ်များအရ Exynos 2200 သည် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် လက်တော့ပ်များ(သို့မဟုတ်)စမတ်ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခု အဖြစ် ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
Samsung ၏ နက်နဲသောအရာ ဖြစ်သည့် Exynos ချစ်ပ် အသစ်သည် ထူးခြားသော တွက်ချက်နိုင်သည့်စွမ်းအား နှင့်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အပါအ ၀ င် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို 5nm နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး GPU ကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန် AMD နှင့် ပူးပေါင်း၍ တီထွင်မည့် ARM SoC ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
PS5 နှင့် Xbox Series X ကဲ့သို့သော ဂိမ်းများတွင် တွေ့ရသည့် RDNA2architecture နှင့် Radeon RX 6000 စီးရီးရှိ ဂရပ်ဖစ်ကတ်များကို အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
Samsung သည် ဇွန်လတွင် GPU ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း ကောလဟာလများက 1200 စီးရီးများနှင့် 2200 စီးရီးနှစ်ခုစလုံးသည် RDNA အခြေပြုဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည့် ချစ်ပ်သုံးမျိုးအတွက် ထုတ်ဖော်ပြသမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ SoC နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နောက်ပိုင်းတွင် Q3 2021 တွင် Laptop ဒီဇိုင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာမည်ဟု ဆိုသည်။
စမတ်ဖုန်းနှင့်လက်တော့ပ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကွာဟမှုသည်သိပ်မများလှသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Exynos 2100 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာပေါ် အခြေခံ၍ Exynos 2200 နှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောပညာရပ်ဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Exynos 2100 သည် 2.91GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Cortex-X1 CPU တစ်ခု၊ 2.81GHz အထိ Cortex-A78 cores သုံးခုနှင့် 2.2GHz တွင် Cortex A55 လေးခု ရှိပါသည်။
Exynos 2100 ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် GPU စွမ်းဆောင်ရည်သည် iPhone 12 Pro ၏ ၅၆.၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
Snapdragon 888 သည်ပို မိုကောင်းမွန်သော်လည်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာစီမံသည်။
Apple သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက Android flagship devices များထက် ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ AMD သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော GPU core ကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သော ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက Weibo ရှိ Ice Universeသည် သတင်းအချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသသောကြောင့် ချစ်ပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းချစ်ပ်ကို Exynos 2200 ဟု ခေါ်နိုင်ပြီး စမတ်ဖုန်းနှင့် မှတ်စုစာအုပ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Apple Siliconကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် Apple ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂေဟစနစ်ကို စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းတိုင်းနှင့် Apple M1 ချစ်ပ်များကို iPad Pro 2021, MacBook, Mac Mini နှင့် iMac တို့တွင် အသုံးပြုသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် Exynos 2200 ချစ်ပ် (သို့) မည်သည့်အရာများကိုမဆို ပထမ ဦး ဆုံး ကြေငြာချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပြီး Samsung Galaxy S22 Series တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် မျှော်လင့်ရပါသည်။